Mampahafantatra Mi MIX FOLD, finday avo lenta voalohany Xiaomi - SmartMe
Xiaomi dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny finday avo lenta voalohany azo raisina, Mi MIX FOLD, tamin'ny fanombohana vokatra vaovao tamin'ny lohataona 2021, izay nanambarana ny Mi 11 Pro sy Mi 11 Ultra teo aloha. Fitaovana fampisehoana anatiny malefaka 8,01-inch miaraka amin'ny vahaolana WQHD + sy fisehoana ivelany 6,52-inch, Xiaomi dia manome fampisehoana lehibe azo zahana amin'ny finday avo lenta rehetra hatreto.
Ho fanampin'izay, ny finday avo lenta dia manao ny laharana voalohany miaraka amina processeur Xiaomi Surge C1 azy manokana, nohamarinina ho an'ny sary matihanina sy solomaso misy ranoka voalohany manerantany amin'ny finday avo lenta. Mi MIX FOLD dia manolotra mpandahateny quad, bateria 5020 mAh ary fanampiana ho an'ny 67 Watts.
Ny lehibe indrindra amin'ny indostria
Ny finday avo lenta voalohany an'ny Xiaomi, ny MI MIX FOLD dia misy endrika famolavolana bisikileta miisa U. Nidina 27% ny lanjany raha oharina amin'ireo finday avo lenta hafa. Ny fitaovana dia manana tendrony maherin'ny 200 amin'ny fanadinana azo antoka ary hatramin'ny 000 tapitrisa miondrika amin'ny fitsapana azo itokisana fatratra.
Miaraka amin'ny fisehoana OLED 8,01 mirefy malefaka miaraka amin'ny vahaolana WQHD +, Mi MIX Fold dia manolotra fika 4: 3. Manolotra ny hatsarana tsy manam-paharoa amin'ny finday avo lenta misy fisehoana habe amin'ny takelaka ao anaty fonosana kely sy matevina, Mi MIX FOLD dia manome traikefa tsy manam-paharoa ho an'ny asa sy ny lalao.
Ny efijery an'ity fitaovana ity misy loko 1 miliara dia narahina tamim-pitandremana tamin'ny alàlan'ny algorithma calibration miloko an'i Xiaomi, ka mahatratra ny mari-pahaizana loko JNCD≈0.29 sy ΔE≈0.35. Nahatratra ny tampon'ny famirapiratan'ny 900 nits sy ny famirapiratan'ny 600 nits, ny efijery dia manome fijerena mahafinaritra amin'ny sehatra maro, ary ny tahan'ny fifandanjana 4: 300, fanohanana an'i Dolby Vision® ary HDR10 + sy ny gamut miloko DCI-P3 dia manampy amin'ny fampisehoana sary sy sary mihetsika mavitrika sy tena misy amin'ny loko mazava.
Ho fanampin'ny fampisehoana anatiny, ny Mi MIX FOLD dia manana fampisehoana AMOLED ivelany 6,52-inch, ary izy koa no lehibe indrindra amin'ny finday avo lenta. Miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 90Hz, ny tahan'ny santionany mikasika ny 180Hz ary ny famahana ny HD +, ny fampisehoana dia natao hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa haingana sy malefaka miaraka amin'ny maranitra sy ny antsipiriany tena tsara.
Ny fampisehoana dia manana tahan'ny lafiny 27: 9 ary afaka mirehareha ny maha-marina indrindra ny loko JNCD≈0,55 sy ΔE≈0,52. Farany, miaraka amin'ny famirapiratan'ny 900 nits, famirapiratan'ny fitetezana 700 nits sy fanohanana HDR10 +, ny zahana dia manome zoro fijerena tsara, fahasamihafana sy loko mifanohitra.
Avy amin'ny algorithm AI an'ny Xiaomi manokana, ny fampisehoana Mi MIX FOLD roa dia mety hiteraka sary sy horonantsary avo lenta, ary afaka mampitombo avo roa heny ny famahana ny sary aza avy amin'ny 720p ka hatramin'ny 1440p. Ho an'ny horonantsary, ny algorithm algorithm AI dia hitombo avo telo heny amin'ny famahana, hampitombo ny kalitao hatramin'ny 480p ka hatramin'ny 1440p.
Smartphone voalohany eran-tany misy mpandahateny Harman Kardon efatra
Xiaomi dia nanatsara kokoa ny rafi-peo ao amin'ny MI MIX FOLD, namorona andiany mpandahateny efatra voalohany teo amin'ny tantaran'ny finday avo lenta. Namboarina symmetrika, ireo mpandahateny 1216 roa dia apetraka amin'ny lafiny roa amin'ny efijery ary mirehareha amin'ny ampli lehibe 0,65mm. Ny toetran'ny fanamafisam-peo dia nohamafisina tamin'ny fanamafisam-peo 1 15V Smart PA, izay ahafahanao mahazo ny feo hatramin'ny 40% mahery kokoa noho ny amin'ny Mi 10 Pro. Mi MIX FOLD dia mandova amin'ny andiam-peon-kira navoakan'i Mi 11 izay navoakan'i Harman Kardon.
Mi MIX FOLD no finday avo lenta voalohany amin'ny indostria mampiasa feon-kira manodidina ny tena kanto. Amin'ny alàlan'ny algorithm alim-pitenenana quad-speaker an'ny Xiaomi, afaka mahatsapa ny famokarana feo spatial ny fitaovana, manampy refy fanampiny amin'ny feo mampiasa mpandahateny roa voalohany, mamorona traikefa fihainoana telo-refy marina.
Ny finday avo lenta matanjaka indrindra azo ahodina ho an'ny fampisehoana avo lenta sy fialamboly lalina
Misaotra ny fampiasana ny fenitra Dolby Vision® ary rafi-peo panoramika 3D mpandahateny efatra, Mi MIX FOLD dia manolotra traikefa lalina noho ny lokony mazava, ny feo avo lenta ary ny faritra fampirantiana tena lehibe. Ny fitaovana dia manohana ihany koa ny fiasan'ny fikandrana marobe, mba hahafahanao mijery horonantsary efatra amin'ny varavarankely samihafa amin'ny fampisehoana amin'ny fotoana iray.
Mi MIX FOLD koa dia manolotra traikefa lalao tsy manam-paharoa tanteraka - tsy re eo amin'ny finday. Ny habe 8,01 ″ dia midika habaka marindrano kokoa, izay manome sehatra fijery misimisy kokoa kokoa noho ny amin'ny smartphone mahazatra. Arakaraka ny haben'ny efijery no mahabe ny asa! Ny fampisehoana Mi MIX FOLD lehibe indrindra dia manohana ny famokarana eny an-dalana, manohana karazana fitaovam-piasana azo ampiharina toy ny efijery fisarahana, fantsom-bokotra misintona sy fitetezana, varavarankely mifanitsy, maody Desktop, mpanampy amin'ny fivoriana AI ary maro hafa.
Fanombohana ny Lensa Liquid sy ny mpikirakira sary Surge C1 avy amin'i Xiaomi
Mi MIX FOLD dia mampiasa ny processeur Surge C1 - chip ho an'ny fanodinana sary matihanina novolavolain'i Xiaomi. Vokatry ny fampandrosoana roa taona sy 140 tapitrisa RMB fampiasam-bola R&D, ity puce ity dia manome fahombiazana avo lenta amin'ny fampiasana CPU sy fahatsiarovana maotina. Io dia mamela azy hanohana ny algorithm 3A nohatsaraina sy ny fifantohana maivana, ny fivoahan'ny fiara ary ny fifandanjana fotsy auto, manatsara ny kalitaon'ny sary.
Mi MIX FOLD koa no finday avo lenta voalohany manerantany miaraka amin'ny haitao Liquid Lens, manokatra ny vanim-potoanan'ny sary bionika. Ny solomaso misy ranoka dia mampiasa ny foto-kevitry ny mason'olombelona mba hamoronana firafitra toy ny solomaso amin'ny foil mangarahara misy ranoka, tsy mitovy amin'ny lantom-bary nentin-drazana. Ny tariben'ny curvature an'ny faritra boribory dia azo ovaina marina noho ny motera manokana miorina amin'ny teknolojia namboarin'i Xiaomi, izay ahafahana manome zoom optika 3x, hatramin'ny zoom 30 an-telefaona ary manome antoka ny halaviran'ny fifantohana 3 sm. Ny lens iray dia manarona ny fiasan'ny lantila roa. Azonao atao ny mitifitra ny antsipiriany bitika ary mankafy ireo renirano sy tendrombohitra mahafinaritra avy lavitra. Ny solomaso misy ranoka koa dia manolotra fampitana hazavana avo lenta, fielezana ambany dia ambany ary fanoherana tsara amin'ny fepetra faran'izay mafy. Izy io dia afaka mitazona ny endrika misy azy ao anaty tontolo misy mari-pana avy
-40 ° C hatramin'ny + 60 ° C, miantoka optika smartphone maharitra, maharitra ary avo lenta.
Mi MIX FOLD koa dia miaraka amina fakantsary piksela lehibe 108MP sy fakan-tsary zoro malalaka 13MP misy fijery 123 ° mahavariana. Ny fakantsary lehibe misy valiny 108MP pixel dia misy solomaso 7P izay afaka mamokatra mivantana sary miaraka amina piksela 108MP avo lenta. Ny fakan-tsary 123 ° ultra-wide angle fakan-tsary dia manohana ny famindrana manan-tsaina ho amin'ny sehatry ny fahitana mahatalanjona rehefa maka sary ireo tranobe sy toerana mahafinaritra. Mandritra izany fotoana izany, ny fanitsiana fanodikodinan'ny AI dia ampiasaina hanatsarana tsara ny sisin'ny sary. Izy io dia tsy afaka mamono ny fanodikodinam-bolan'ny sisintany fotsiny, fa koa manitsy ny fanodikodinam-tarehy amin'ny sarin'ny tarika somary malalaka.
Batterie 5020 mAh - ny fahafaha-manao lehibe indrindra amin'ny finday avo lenta miaraka amin'ny efijery mivalona, ​​voaloa 100% ao anatin'ny 37 minitra
Mi MIX FOLD dia manana bateria 5mAh, manolotra ny fahafaha-manao lehibe indrindra amin'ny fitaovana azo soloina eny an-tsena ankehitriny. Mampiasa ny maritrano bateria roa mifanindran-dàlana misy an'i Xiaomi izay misy bateria roa miaraka amin'ny kapila 020mAh sy 2,460mAh. Ny rafitra mirazotra manokana dia ahafahan'ny fahombiazan'ny 2,560A mahavariana ankehitriny, manome hery mahery vaika hampandeha ireo mpandahateny efatra amin'ny smartphone.
Ho fanampin'izany, Mi MIX FOLD koa dia manohana fiampangana haingana 67W. Miaraka amin'ny chipset IC IC telo sy ny fifandraisana mifandraika amin'ny subsystem famandrihana roa faran'izay mahomby, ny tahan'ny fiovam-po hatramin'ny 97,5% dia azo tanterahina, ary mamela fiampangana feno ao anatin'ny 37 minitra fotsiny.1. Mi MIX FOLD dia manolotra ihany koa ny teknolojia bateria CNT hanamorana ny fandefasana fiarovana azo antoka sy haingana kokoa mandritra ny fanitarana ny androm-piainany.
Rafitra fihenan'ny lolo revolisionera sy ny fahombiazan'ny sainam-pirenena
Mi MIX FOLD dia manana fitaovana fikirakirana finday Qualcomm® Snapdragon ™ 888. ary ny teknolojia 5nm mandroso indrindra dia manatsara ny fahombiazan'ny CPU, GPU ary AI amin'ny sehatry ny finday ary mampihena ny fanjifana herinaratra. Fahatsiarovana vaovao 5MHz LPDDR3,200, ampiarahana amin'ny fahatsiarovan-tena haingam-pandeha UFS 3.1 haingam-pandeha, dia manohana ny fahombiazan'ny Snapdragon 888.
Raha te hampiasa amin'ny fomba mahomby ny faritry ny tranga azo avadika, ny MI MIX FOLD dia manana rafitra fihenan'ny lolo, izay mampifangaro ny rano mangatsiaka VC, gel mafana, ravina grafit marolafy ary fomba famafana hafanana hafa. Ny velaran-tany fanaparitahana hafanana dia avo 22mm ², manatsara be ny fahaiza-mihena mandritra ny asa fampidinana entana be, famahanana haingana ary fampidinana 583,7G haingana. Ny fanaparitahana ny hafanana mahomby dia mamela ny MI MIX FOLD hihazakazaka moramora sy tsy mihantona.
Mi MIX FOLD dia atolotra amin'ny Standard and Ceramic Special Edition. Ny kinova mahazatra dia misy fonony fitaratra Corning ao ambadika® Gorilla® Glass vera faha-XNUMX miaraka amina endrika vita amin'ny seramika. Ny kinova Ceramic Special Edition dia miaraka amina bokotra volamena sy bokotra volume, ary koa valiny mainty ao ambadiky ny tranga misy sokitra laser manokana.
Ny smartphone dia homena sarany RMB 9999 ho an'ny 12GB + 256GB version, ary RMB 12999 ho an'ny 16GB + 512GB version.
Mi MIX FOLD dia hovidiana amin'ny fomba ofisialy manomboka ny 16 aprily any amin'ny tanin-tanin'i Shina amin'ny alàlan'ny fantsona Xiaomi ofisialy.
Xiaomi dia manolotra ny mpamaky vaovao InkPalm 5. Ny vidiny ho an'ity fitaovana ity dia somary ambany ihany - efa nianarantsika ny pitsopitsony ara-teknikan'ity fitaovana ity. Jereo izay azony atolotra antsika. Mahagaga ny masontsivana Xiaomi InkPalm 5 no mpamaky e-vaovao ...